ALIEXPRESS တခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်အားခြေရာခံဖို့ကိုဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို Adobe က Premiere Pro - သင်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမယ့်နေရာလေးကိုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတစျခုမှာစံအရောင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်သင်အရောင်တန်ချိန်, အရောင်အဝါနှင့်ဗီဒီယိုရွှဲ, သို့မဟုတ်၎င်း၏အပိုင်းအချို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့ကိုကို Adobe Premiere Pro ကိုအတွက်လျှောက်ထားဘယ်လိုအရောင်ဆုံးမခြင်းကိုစဉ်းစားကြကုန်အံ့။
Adobe Premiere Pro ကို Download လုပ်ပါ
Adobe Premiere Pro မှာအရောင်ဆုံးမခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေး
စတင်ရန်, ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါလိမ့်မည်သည့်သစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထဲသို့ဗီဒီယိုတင်သွင်း။ ကဆွဲပါ «အချိန်လိုင်း».
overlay Brightness ကို & Contrast အကျိုးသက်ရောက်မှု
ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့မျိုးစုံသက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းပေါင်းစပ် « CTR + A »ဗီဒီယိုရန်ထွက်ရပ်တယ်။ အဆိုပါ panel ကိုကိုသွားပါ «အကျိုးသက်ရောက်မှု» နှင့်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရွေးပါ။ ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်ထိုသို့ - « Brightness ကို & Contrast »။ သူကအရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘညှိ။ အဆိုပါ tab ကိုမှရွေးချယ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆွဲပါ « Effect ထိန်းချုပ်မှုများ».
အထူး icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ setting များကိုဖွင့်ပါ။ ဤတွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤလယ်ကွင်းများအတွက်သီးခြားအရောင်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် «တောက်ပမှု» တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါ။ ဘယ်ကဗီဒီယိုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတမင်တကာမိတ်ဆက် «100»နိုင်ရန်အတွက်, ဒါကြောင့်သင်ခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ , မီးခိုးရောင် icon ကို click ပါလျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၏နာမတော်ဘေးရှိ slider ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်းအလင်းမှိန်ခြင်းလယ်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့၏ဗီဒီယိုကပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျလုပ်ရောင်ခြည်အနည်းငယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ ယခုငါတို့ဒုတိယ parameter သည်ပြောင်းရွှေ့ « Contrast »။ တနည်းကား, ငါမိတ်ဆက်ပေး «100» နှင့်သင်မြင်အဘယျအဖြစ်ပျက်ကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အဖြစ်လျှော၏အကူအညီနှင့်အတူ, Adjust ။
overlay အကျိုးသက်ရောက်မှုသုံး-Way ကိုအရောင် Corrector
ဒါပေမယ့်အရောင်ဆုံးမခြင်းဤ parameters များကိုအချို့မလုံလောက်သေးပါ။ ငါအရောင်များနှင့်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ချင်ဒါကြောင့်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ် «အကျိုးသက်ရောက်မှု» နှင့်အခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှေးခယျြ «သုံး-Way ကိုအရောင် Corrector »။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရွေးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါကပိုကကြိုက်တယ်။
ဒီသက်ရောက်မှုကိုတိုးချဲ့, သင်အတော်လေးအနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာမြင်ရပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ့် « Tonal Range Difinition »။ လယ်ပြင်၌ « Output » တစ်ဦး blending mode ကိုရှေးခယျြပါ « Tonal Range »။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံရှိရာအဘယ်အရာကိုသေံကျနော်တို့စခန်းချဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable နိုင်ဖို့အတွက်သုံးဒေသများသို့ခွဲခြားထားတယ်။
ကျနော်တို့ box ထဲမှာတစ်ဦးကို tick ချပြီးနေကြတယ် « Show ကို Split ကိုကြည့်ရန်»။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံမူရင်းဗားရှင်းပြန်ရောက်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကညှိနှိုင်းမှုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
ကျနော်တို့သုံးကြီးမားသောအရောင်အကွာအဝေးကိုကြည့်ပါ။ ငါမှောင်မိုက်သောအရောင်အဆင်း၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်, ထို့နောက်ငါသည်အဦးဆုံးသောပတ်ပတ်လည်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာအလိုချင်သောအရိပ်ဆီသို့ဦးတည်ထုံးစံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဆွဲထုတ်။ ယင်းအတွက်အထက်ပိုင်းအတွက် « Tonal အကွာအဝေး» အပိုဆောင်း mode ကိုဖော်ထုတ်။ ကျွန်မတို « Midtones » (Semitone) ။
ရလဒ်အဖြစ်, ငါ့ဗီဒီယိုအားလုံးအမှောင်ထဲမှာအရောင်တွေသတ်မှတ်ထားသောအရောင်ဆည်းပူးပါလိမ့်မယ်။ အနီရောင်ဥပမာ။
ယခုငါတို့အလင်းအရောင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီအဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုတတိယစက်ဝိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုအရောင်ရွေးချယ်ရာတွင်, တူညီတဲ့လုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ဗီဒီယို၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းရွေးကောက်တော်မူသောက hue ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရဲ့ကျွန်တော်အဆုံး၌ရရှိပါသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ ပုံရိပ်မူရင်းပုံရိပ်ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
အားလုံးသည်အခြားဆိုးကျိုးများလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များကလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသိပ်။ ထို့အပြင်သင်အစီအစဉ်၏စံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးချဲ့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော plugins ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch:7Amazing Robots That Really Exist - Fact Monkey interesting (သြဂုတ်လ 2019).